Jesosy: Angano fotsiny - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > toriteny > Jesosy: angano fotsiny
Fotoam-piheverana ny vanim-potoana ny Advent sy ny Noely. Fotoana handinihana an'i Jesosy sy ny Fahatongavany ho nofo, fotoam-pifaliana sy fanantenana ary fampanantenana. Ny olona eran-tany dia manambara ny fahaterahany. Ny karolan'ny Noely iray aorian'ny iray dia re momba ny etera. Ao amin'ireo fiangonana dia ankalazaina amin'ny filalaovana crib, cantatas ary fihira-korana ny festival. Fotoan'ny taona izay hieritreretan'ny besinimaro hianatra ny marina momba an'i Jesosy Mesia. Saingy indrisy, maro no tsy mahatakatra ny dikan'ny vanim-potoana Krismasy ary mankalaza ny festival ihany izy ireo satria ny fialam-boly miaraka amin'izany. Io dia manalavitra azy ireo be loatra satria izy ireo tsy mahalala an'i Jesosy na mifikitra amin'ny lainga fa angano fotsiny izy - filazana fa notazony hatramin'ny niandohan'ny Kristianisma.
Matetika amin'izao vanim-potoana izao ny filazan'ny lahatsoratra momba ny asa fanaovan-gazety: "Angano i Jesosy", ary matetika ny fanamarihana dia voalaza fa tsy azo itokisana ny Baiboly ho porofon'ny tantara. Nefa ireo fiheverana ireo dia tsy misy fiheverana fa afaka mitodika ny lasa lavitra noho ny loharanom-baovao maro "azo itokisana". Matetika ny mpahay tantara dia manonona ny asa soratr'i Herodotus ho fijoroana ho vavolombelona azo itokisana. Na izany aza, dia misy ihany ny valo fantatry ny fanamarihany, ny vao haingana indrindra dia ny tamin'ny 900 - sahabo ho 1.300 taona taorian'ny androny.
Ampifanoherinao amin'ny Testamenta Vaovao "efa simba" izany, izay nosoratana fotoana fohy taorian'ny nahafatesan'i Jesosy sy nitsanganany. Ny rakitsoratra voalohany (sombin'ny Filazantsaran'i Jaona) dia teo anelanelan'ny 125 sy 130. Misy mihoatra ny 5.800 ny dika mitovy amin'ny Testamenta Vaovao amin'ny teny grika, manodidina ny 10.000 amin'ny latinina ary 9.300 amin'ny fiteny hafa. Te hampahafantatra anao aho amin'ny teny nalaza telo malaza izay manasongadina ny maha-azo itokiana ireo sary teo amin'ny fiainan'i Jesosy.
Ny voalohany dia mankany amin'ny mpahay tantara jiosy Flavius ​​​​Josephus avy amin'ny 1. Century back:
Tamin'ity fotoana ity dia velona i Jesosy, lehilahy hendry [...]. Fa izy dia nahavita asa nahatalanjona sady mpampianatra ny olona rehetra izay nandray ny fahamarinana am-pifaliana. Ka nahasarika Jiosy maro ary koa Jentilisa maro. Izy no Kristy. Ary na dia i Pilato aza, izay nitaona ny olona nanan-kaja indrindra, dia nanameloka azy ho faty teo amin'ny hazofijaliana, ireo mpanara-dia azy taloha dia tsy nivadika taminy. [...] Ary ny olon'ny Kristiana izay miantso ny tenany aoriany dia mbola misy mandraka androany. [Antiquitates Judaicae, Alemanina: Rakitry ny ela jiosy, Heinrich Clementz (adika.)].
FF Bruce, izay nandika ny teny latinina tany am-boalohany dia nilaza fa "ny fahatsaran'i Kristy dia tsy azo iadian-kevitra amin'ny mpahay tantara tsy manavakavaka toa an'i Julius Caesars."
Ny teny faharoa dia niverin-dàlana ho an'ny mpahay tantara romanianina Carius Cornelius Tacitus, izay nanoratra ny asa sorany tamin'ny taonjato voalohany ihany. Mikasika ny fiampangana fa nandoro an'i Roma i Nero ary nanameloka ny Kristianina taty aoriana, dia nanoratra izy hoe:
[...] Nametraka ny tsiny tamin'ny hafa i Nero ary nanasazy ireo olona izay nankahalan'ny vahoaka sy nantsoiny hoe Kristiana noho ny habibiana nataony. Ny anarany io, Christ, dia novonoin'ny governora Pontius Pilato nandritra ny fotoana nanjakan'i Tiberio. [...] Noho io antony io, ireo izay nanao fiaiken-keloka dia nosamborina aloha, ary avy eo, ho valin'ny fanambaran'izy ireo, olona marobe izay tsy dia voaheloka noho ny fandoroana azy ireo noho ny fankahalany ankapobeny ny olombelona. (Annales, 15, 44; fandikan-teny alemanina taorian'ny GF Strodtbeck, natontan'i E. Gottwein)
Ny sivana fahatelo dia avy amin'i Gaius Suetonius Tranquillus, mpahay tantara ofisialy an'i Roma nandritra ny nanjakan'i Trajan sy Hadrian. Tamin'ny asa nosoratana tamin'ny taona 125 momba ny fiainan'ireo Caesars roa ambin'ny folo voalohany dia nanoratra momba an'i Claudius, izay nanjaka tamin'ny taona 41 ka hatramin'ny 54 izy:
Ny jiosy, izay notazomin'i Chrestus ary nanohy niteraka korontana, dia nandroaka an'i Roma izy. (Kaiserbiographien an'i Sueton, Tiberius Claudius Drusus Caesar, 25.4; nadikan'i Adolf Stahr; mariho ny tsipelina "Chrestus" ho an'i Kristy.)
Ny fanambarana nataon'i Suetonius dia miresaka ny fanitarana ny Kristianisma any Roma talohan'ny 54 taona, roa taona monja taorian'ny nahafatesan'i Jesosy. Eo am-pandinihana izany sy ny firesahana hafa, ny Testamenta Vaovao anglisy I. Howard Marshall dia namarana hoe: "Tsy azo atao ny manazava ny fahatongavan'ny Fiangonana Kristiana na ny Filazantsara momba ny Filazantsara ary ny fomban'ny fomba nentin-drazana nefa tsy nanaiky hoe ny namorona ny kristianisma dia tena marina. velona. "
Na dia manontany tena aza ny manam-pahaizana hafa ny maha-azo itokiana ireo teny nindramina roa voalohany ary misy aza mihevitra azy ireo ho sandoka nataon'ny tanana kristiana, ireo andinin-tsoratra masina ireo dia miorina amin'ny toerana mafy. Amin'ity toe-javatra ity dia faly aho nandre ny hevitry ny mpahay tantara Michael Grant tao amin'ny bokiny Jesus: An Historian's Review of the Gospels: "Rehefa miresaka momba ny vaovao Mampiasa ny mason-tsivana mitovy ao amin'ny Wills isika tahaka ireo lahatsoratra taloha hafa izay mirakitra tantara ara-tantara - izay tokony hataontsika - tsy azontsika lavina ny fisian'i Jesosy mihoatra ny azontsika lavina fa olona mpanompo sampy maro izay tsy azo nolavina mihitsy ny tena fisian'ireo tantara ankehitriny. "
Na dia mandà haingana izay tsy tiany hino aza ireo tsy mino, dia misy ny maningana. Ny teolojianina John Shelby Spong, fantatra amin'ny maha-skeptika sy fahalalahan-tanana azy, dia nanoratra tao amin'ny Jesus for the Non-Religious: "I Jesosy no olona voalohany sy lehibe indrindra izay nonina tamina toerana iray tamin'ny fotoana iray. Ilay lehilahy Jesosy dia tsy angano, fa olo-manan-tantara izay nivoahan'ny angovo lehibe - angovo mbola mitaky fanazavana ampy. "
Amin'ny maha tsy mino an'Andriamanitra, i CS Lewis dia nino fa ny fahitana ny Testamenta Vaovao momba an'i Jesosy dia angano fotsiny. Saingy rehefa avy namaky azy ireo izy ary nampitahainy tamin'ny angano sy angano taloha fantany dia fantany fa tsy misy ifandraisany amin'izy ireo ireo asa-soratra ireo. Ny endriny sy ny endriny kosa dia toy ny endri-tsoratra fahatsiarovana izay maneho ny fiainana andavan'andro. Rehefa avy nahatsapa izany izy dia nisy ny sakana amin'ny finoana iray. Nanomboka teo dia tsy nanana olana ny hitazomana ny maha-marina an'i Jesosy ho marina.
Betsaka ny olona tsy mino no milaza fa tsy mino an'i Jesosy i Albert Einstein, mpino an'Andriamanitra. Na dia tsy nino "Andriamanitra manokana" aza ity farany, dia nitandrina izy mba tsy hanao ady amin'ireo nanao izany; satria: "Ny finoana toy izany dia toa tsara kokoa noho ny tsy fahampian'ny fomba fijery transendental" Max Jammer, Einstein and Religion: Physics and Theology; Alemanina: Einstein sy fivavahana: fizika sy teolojia) Einstein, izay nihalehibe tamin'ny naha-Jiosy azy, dia nanaiky fa "nafana fo tamin'ny endrika fahazavan'ny Nazareana izy". Rehefa nanontanian'ny iray tamin'ireo mpiresaka izy raha fantany ny fisian'i Jesosy ara-tantara, dia izao no navaliny: “Tsy misy fanontaniana. Tsy misy olona afaka mamaky ny Filazantsara raha tsy mahatsapa ny tena fisian'i Jesosy. Ny toetrany dia manako amin'ny teny rehetra. Tsy misy angano voataona amin'ny fiainana toy izany. Hatraiza ny fahasamihafana, ohatra, ny fiheverana azontsika avy amin'ny tantara iray nataon'ny maherifo malaza iray toa an'i Theseus. Ireo sy ireo maherifo hafa amin'ity endrika ity dia tsy manana ny tena maha-izy an'i Jesosy. ”(George Sylvester Viereck, The Saturday Evening Post, 26 Oktobra 1929, What Life Means to Einstein: A Interview)
Afaka manohy hatrany aho, fa araka ny nasehon’i Raymond Brown, manam-pahaizana katolika romana, dia ny fifantohana amin’ny fanontaniana hoe angano i Jesosy no mahatonga ny maro tsy hahita ny tena dikan’ny filazantsara. Ao amin'ny The Birth of the Messiah, i Brown dia milaza fa matetika no nanatona azy ireo izay te hanoratra lahatsoratra momba ny maha-tantara ny nahaterahan'i Jesosy. “Avy eo, miaraka amin’ny fahombiazana kely, dia miezaka ny handresy lahatra azy ireo aho fa afaka manampy bebe kokoa amin’ny fahatakarana ny tantaran’ny nahaterahan’i Jesosy izy ireo amin’ny fifantohana amin’ny hafatr’izy ireo fa tsy amin’ny fanontaniana iray izay tsy tena ifantohan’ny evanjelistra.” Mifantoka amin’ny fanaparitahana ny tantaran’ny Krismasy, nahaterahan’i Jesosy Kristy, isika, fa tsy miezaka ny handresy lahatra ny olona hoe tsy angano i Jesosy, fa porofo velona amin’ny zava-misy marina momba an’i Jesosy. Izany porofo velona izany dia ny fiainana izay iainany ankehitriny ao anatintsika sy ny fiaraha-monina misy antsika. Ny tanjon’ny Baiboly dia tsy ny hanaporofo fa marina ara-tantara ny nahatongavan’i Jesosy ho nofo, fa ny hizara amin’ny hafa ny antony nahatongavany sy ny dikan’ny fiaviany ho antsika. Mampiasa ny Baiboly ny Fanahy Masina mba hifandraisana marina amin’ilay Tompo tonga nofo sy nitsangana tamin’ny maty izay mitaona antsika hanatona Azy mba hinoantsika Azy sy hanomezam-boninahitra ny Ray amin’ny alalany. Tonga teto amin’izao tontolo izao Jesosy ho porofon’ny fitiavan’Andriamanitra antsika tsirairay avy (1 Jao 4,10). Ireto ambany ireto ny antony vitsivitsy hafa nahatonga azy ho tonga:
- Mitady sy mamonjy izay very (Lioka 19,10).
- Mba hamonjy ny mpanota sy hiantso azy hibebaka (1 Timoty 1,15; marika 2,17).
- Manolotra ny ainy hanavotana ny olona (Matio 20,28).
- Ho vavolombelona hanambara ny marina (Jaona 18,37).
- Hanao ny sitrapon’ny Ray sy hitarika zanaka maro ho amin’ny voninahitra (Jao 5,30; Hebreo 2,10).
- Ho fahazavan’izao tontolo izao, lalana, fahamarinana ary fiainana (Jao 8,12; 14,6).
- Hitory ny vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra (Lio 4,43).
- Hanatanteraka ny lalàna (Mat 5,17).
- Satria nandefa azy ny rainy: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino Azy dia tsy hohelohina; fa izay tsy mino dia efa voaheloka rahateo, satria tsy mino ny anaran’ny Zanakalahy Tokan’Andriamanitra izy” (Jaona. 3,16- iray).
Amin'ity volana ity isika dia mankalaza ny fahamarinana fa tonga teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalàn'i Jesosy Andriamanitra. Tsara ny mampatsiahy ny tenantsika fa tsy ny olon-drehetra no mahalala an'io fahamarinana io ary isika dia nantsoina hizara izany amin'ny hafa. Mihoatra ny tarehimarika amin'ny tantara ankehitriny, Jesosy dia Zanak'Andriamanitra tonga hampihavana ny rehetra amin'ny Ray amin'ny Fanahy Masina. Izany dia mahatonga ity fotoana ity ho fotoana fifaliana, fanantenana ary fampanantenana